१९१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार हात पारेका तिनी एक भक्त ख्रीष्टियान थिए – Bachan Tv
१९१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार हात पारेका तिनी एक भक्त ख्रीष्टियान थिए
BACHAN TV November 5, 2017
थोमस डब्लु. विलसनका पिता डा. जोसेफ आर. विलसन पास्टरसाथै सेमिनारका प्राध्यापक थिए । बुबा आमा नै छोरा थोमसप्रति निकै समर्पित थिए । तिनीहरूले छोरोलाई दैनिक बाइबल अध्ययनमा तालिम दिन्थे । संसारलाई ख्रीष्टियान परिप्रेक्ष्यबाट हेर्नुपर्छ भनी तिनीहरूले थोमसलाई सिकाउने गर्थे ।
किशोर अवस्थामा येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका थोमसले मानव-जातिसित परमेश्वरले बाँध्नुभएको करारको विषयमा राम्ररी सिकेका थिए । मानिसहरूलाई परमेश्वरले आज्ञाहरू दिनुभयो जसद्वारा तिनीहरू जिउनुपर्छ र उहाँमाथि भर पर्नेहरूलाई उहाँले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पनि दिनुभयो ।
राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधि पुरा गरेका थोमसको मुख्य विश्वास यही थियो कि परमेश्वरले संसारमा शासन गर्नुहुन्छ र मानिसहरू उहाँको इच्छामा रहेर यस संसारमा उहाँका सेवकहरू बन्नुपर्छ ।
अन्ततः यी थोमसलाई सारा दुनियाँले वुडरो विलसनको नाउँले चिन्यो जो इतिहासमा आजकै दिन अर्थात् ५ नोभेम्बर १९१२ मा अमेरिकाको अट्ठाइसौँ राष्ट्रपतिमा चुनिए । तिनी ख्रिस्टाब्द १९१३-१९२१ सम्म राष्ट्रपति पदमा रहेका थिए । तिनका आदर्शहरूले ख्रीष्टियान शिक्षा र ख्रीष्टियान विश्वासमा जरा गाडेका थिए । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेका विलसन लेखकसाथै विद्वान् पनि थिए । १९१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार हात पारेका तिनी एक भक्त ख्रीष्टियान थिए ।
यी तिनै राष्ट्रपति हुन् जसले बाइबलको विषयमा यसो भनेका थिए, “जीवनको अर्थ, परमेश्वरको स्वभाव र मानिसहरूका आत्मिक स्वभावसाथै खाँचोको बारेमा बाइबल प्रकाशको एक मात्र सर्वोच्च स्रोत हो । यो जीवनको एक मात्र मार्गदर्शक हो जसले आत्मालाई शान्ति र उद्धारको मार्गमा वास्तवमै अगुवाइ गर्छ ।”
युवा दर्शन पत्रिकाका प्रकाशक दिनेश श्रेष्ठले सिवी गहतराजसँग गर्नुभएको ताजा अन्तर्वार्ता
येशू को हुनुहुन्छ ?
BACHAN TV	January 3, 2018
BACHAN TV	January 2, 2018
इतिहासमा आज (डिसेम्बर २८ )
BACHAN TV	December 29, 2017
रुपियाँ-पैसाको मोहबाट टाढा थिए र हराएकाहरूका निम्ति जोसिला थिए
BACHAN TV	December 26, 2017
बाँच्ने कुनै उपाय नदेखेपछि तिनले उही येशूलाई सम्झन पुगे
BACHAN TV	December 22, 2017
अन्तरिक्षमा यात्रा गरेपछि तिनको विश्वास झनै वृद्धि भएको थियो
तपाईं जुनसुकै परिस्थितिमा पनि खुसी हुन सक्नुहुन्छ । तपाईंले केवल परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न आवश्यक छ ।”
तिनको सेवाद्वारा हजारौँ मानिसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने मौका पाए
BACHAN TV	December 3, 2017
त्यस बाइबलले तिनको जीवनमा यस्तो असाधारण प्रभाव पार्थ्यो भनी कसैले अनुमान पनि गरेको थिएन ।
BACHAN TV	December 2, 2017
रोजा एक भक्त ख्रीष्टियान थिइन् जो ख्रीष्टियान परिवारमा हुर्केकी थिइन्
BACHAN TV	December 1, 2017